Thein Xtike Aung | Customer Service And Sales Representative at British Council - Levo
Thein Htike Aung isastudent majoring in English Specialization at Dagon University. He was graduated from Access English Micro-scholarship Program in Myanmar powered by US Embassy Rangoon (2010-2012) and Technical Diploma majoring in Civil Engineering from Thanlyin Technological University (2011-2014). He is willing to be a...
"Capacity Building for Social Enterprise" သင့်ရဲ့ အဖွဲ့အစည်း/လုပ်ငန်းသည် လူမှုအကျိုးပြုသော ရလာဒ်များဖော်ဆောင်ရန် ဖွဲ့စည်းထားပါသလား။ အဆိုပါ သင်၏ ပန်းတိုင်သို့ရောက်ရှိရန် စီးပွားရေးဆိုင်ရာနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုနေပါသလား။ သို့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာနည်းလမ်းများ
သင့်ရဲ့ အဖွဲ့အစည်း/လုပ်ငန်းသည် လူမှုအကျိုးပြုသော ရလာဒ်များဖော်ဆောင်ရန် ဖွဲ့စည်းထားပါသလား။ အဆိုပါ သင်၏ ပန်းတိုင်သို့ရောက်ရှိရန် စီးပွားရေးဆိုင်ရာနည်းလမ်းများကို…
Myanmar Youth Initiative
Empower to National Development focusing on youth to Building Better Future Myanmar. Main Responsibilities are connecting to Youth Organizations, leading in Organizing Events, facilitating in Workshops and forum and planning in Campaigns and Activities.